Ụdị Hourglass - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ogbugbu Hourglass na onu ogugu na-eme ka mmadu mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo na-egbuke egbuke n'elu akpa nke aka ha na-eji ejiji ink na-acha uhie uhie emepụta ihe dị iche iche n'ubu iji mee ka ha dị mma na ndị na-adịghị mma.
2. Ogbugbu mmiri na-egbu egbu na-eme ka nwoke dị ka onye na-adịghị mma
Ndị mmadụ na-achọ ime ka egbugbere anya Hourglass na aka nri ha. Ụdị egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị nwoke.
3. Ogbugbu mmiri na-egbuke egbuke na -eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-agakarị na-egbu egbu egbu mmiri na-egbuke egbuke na-acha odo odo na-acha odo odo na odo odo na bicep; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
4. Ogbugbu Hourglass na ogwe aka dị ala na-eme ka mmadụ na-ele anya
Brown ndị mmadụ na-ahụ maka egbugbere ọnụ Hourglass n'elu ogwe aka ala; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
5. Ogbugbu Hourglass na ejiji okooko osisi na-acha aja aja na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
Ụmụ agbọghọ na-agbapụ agbapụ na-achọ ka egbugbu egbugbere anya na-acha na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na azụ. Nke a na-enye ha anya dị ebube
6. Ogbugbu Hourglass na ogwe aka dị ala na -emepụta ink pink na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo egbugwoju anya na azụ azụ na-eji ncha ink pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
7. Ogbugbu Hourglass na ogwe aka aka nri aka nri, mee ka ụmụ nwoke mara mma
Ndị mmadụ ga-eme ka egbugbere anya Hourglass na ogwe aka nri aka nri na ogwe aka iji dọta mmasị ndị mmadụ
8. Ogbugbu mmiri na-egbuke egbuke na-eme ka ndị inyom nwee anya dị egwu
Ụmụ nwanyị na-ahụ n'anya na-egbu egbu egbugbu na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ n'elu ogwe aka. Nke a na-enye ọhụụ ahụ
9. Ogbugbu egbu egbu na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ ụfụ mmiri Hourglass na ubu ha na -acha anwụrụ ojii ink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
10. Ogbugbu egbugbere anya na ubu na-eme ka nwanyi yie anya
Ndị inyom na-eyiri uwe ojii na-enweghị aka na-ahụ n'anya na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ ya na ejiji ink mara mma n'elu ogwe aka; Ejiji egbu egbu a na-ejikọ elu nke elu ahụ iji mee ka ha maa mma ma mara mma.
11. Ogbugbu mmiri na-egbuke egbuke n'ahụ nwa agbọghọ ahụ na-enye ya anya dị egwu
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka ebumnuche nke egbugbere anya Hourglass ahụ na ink na-eji oji. Nke a na-eme ka ha mara mma
12. Ogbugbu Hourglass na ogwe aka dị ala na-eme ka mmadụ na-ele anya
Brown ndị mmadụ na-ahụ maka egbugbere ọnụ Hourglass na ogwe aka dị n'okpuru mkpịsị aka nwa ink; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
13. Ogbugbu egbu egbu na-eme ka nwanyị mara mma
Ndị inyom na-ahụ tattoo Hourglass na ubu ha na -emepụta mkpịsị uhie ink nke pink; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
14. Ogbugbu Hourglass na ogwe aka ihu ala na-eme ka ihe efu na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ tattoo egbugwoju anya na ogwe aka ha na -emepụta ink pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
15. Ogbugbu Hourglass maka ubu na-enye anya n 'umu nwanyi
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-acha aka na-aga maka egbugbere anya Hourglass na ubu ha na-acha mma ifuru na-acha uhie uhie iji weta ọha mmadụ
16. Ogbugbu mmiri na-egbuke egbuke na aka nri, mee ka ụmụ nwoke mara mma
Ndị mmadụ ga-eme ka egbugbere anya Hourglass dị n'aka nri ha iji dọta mmasị ndị mmadụ
17. Ogbugbu egbu egbu na-eme ka nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ tattoo Hourglass na azụ azụ ha na imepụta ink nke ifuru; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
18. Ogbugbu egbu egbu maka ụmụ nwoke na-eme ka ha lee anya
Ndị mmadụ na-ahụ ụdị nkocha ink nke agba aja aja, tattoo Hourglass na bicep iji mee ka ha bụrụ dike
19. Ogbugbu Hourglass na n'ubu ahụ na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka ọmarịcha egbugbere mmiri Hourglass na nhazi ime ink pink na ubu. Ejiji egbu egbu a mara mma.
20. Egbu egbu egbu na-enye ụmụ agbọghọ ahụ anya mara mma
Ụmụ agbọghọ, na-eyi obere uwe na mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka egbugbere anya Hourglass n'akụkụ akwara ụkwụ ha na -emepụta ifuru na-acha odo odo iji mee ka ha mara mma karịa ụmụ nwoke.
21. Ogbugbu Hourglass maka ndị ikom na-acha uhie uhie na ink nke ink na-eme ka otu nwoke dị mma
Ndị na-achọ ka ndị na-achọ ọdịmma onwe ha n'anya ga-ahụ tattoo Hourglass na-achacha acha anụnụ anụnụ na oji ink na bicep
22. Ngwá akwụkwọ nkocha akwa nke egbugbere anya Hourglass na azụ azụ nke ụmụ nwanyị na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ ga-aga maka ink nke odo odo, akara ngosi tattooglasses na azụ azụ iji mee ka ha yie ihe mara mma ma mara mma
23. Ogbugbu egbu egbu maka egbugbere ọnụ na-eweta anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka ọmarịcha egbugbere anya Hourglass na apata ụkwụ ha site na ime obi. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
24. Ogbugbu Hourglass maka ubu na-enye anya n 'umu nwanyi
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-akacha aka ga-aga maka egbugbere anya Hourglass na ubu ha iji mee ka ndị mmadụ mara anya ha
egbu egbu egbuegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu okpuụmụnne mgbuNtuba ntughariima ima mmaaka mma akaegbu egbu diamonddi na nwunyeegbugbu egbugbuegbu egbu maka ụmụ nwokeenyí egbu egbuna-adọ aka mmangwusi pusiUche obiAnkle Tattoosụkwụ akamehndi imeweaka akaudara okooko osisiagbụrụ eboenyi kacha mma enyimma tattoosndị na-egbuke egbukeEgwu ugonnụnụọnwa tattoosrip tattooskoi ika tattooegbu egbu hennaegbu egbuegbu egbu mmiriegwu egwuzodiac akara akaraegbu egbu osisi lotusakwara obiọdụm ọdụmazụ azụndị mmụọ ozina-egbu egbuỤdị ekpomkpaarịlịka arịlịkaechiche egbugbun'olu oluokpueze okpuezeegbu egbu ebighi ebiakara ntụpọGeometric Tattoosaka akaakpị akpị